UkuThengisa ngeSelfowuni: Yenze buqu | Martech Zone
I-Hipcricket's Uphando olwenziwa kwi-Intanethi ngo-2014, Isimo saBaxumi kuThengiso lweSelfowuni, yaqhutywa ngo-Epreli 2014 kwaye yayijolise kubantu abadala abayi-1,202 e-US. Uphando lufumanise ukuba abathengisi sele bekwamkela ukuhamba kwaye abathengi bayaphendula. Isibini kwisithathu sabaphenduli bathi bafumene umyalezo obhaliweyo ophawu lwentengiso kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo kwaye phantse isiqingatha sabathengi bafumene umyalezo obhaliweyo uluncedo.
Nangona kunjalo, abathengisi baphoswa luphawu xa kusiziwa ekuthumeleni imiyalezo efanelekileyo, eyeyakho, ecaphukisa abathengi:
Iipesenti ezingama-52 zithe umyalezo uziva Ukungena ngaphakathi okanye ugaxekile.
I-46% ithe umyalezo wawungekho ezifanelekileyo kwimidla yabo.
Iipesenti ezingama-33 zithe umyalezo khange unike naliphi na ixabiso.
I-41% ithe izokwabelana ngolwazi oluthe kratya kunye neempawu ukuba zenziwe izibonelelo ezifanelekileyo okanye amatikiti.
Kukho igumbi elikhulu lokukhula kweemveliso ukuseka unxibelelwano olunentsingiselo nolungapheliyo nabathengi babo. Olu phando lubonisa ukuba abathengi bathatha inxaxheba kwimveliso ngokuthengisa ngeselula, okukhuthazayo. Kodwa, ii-brand kufuneka zinikezele ngemikhankaso efanelekileyo kunye neyabantu okanye baya kuphulukana nesabelo esikhulayo sentengiso. UDoug Stovall, I-Hipcricket COO
tags: hippcricketintengiso yeselulaamatikiti eselulaurhwebo mobileamatikiti esmsIzivumelwano zeSMSumyalezo we-smsUnikelo lwee-smsiklabhu yokubhaliweyoumyalezo wegamaimiyalezo ebhaliweyo
ISEBOX: UkuPapashwa kweMixholo yeVidiyo kunye nokuSasazwa
LuHlaziyo lwe-Smartphone! Sele ulungele?